မြန်မာစာအဖွဲ့ - ဝီကီပီးဒီးယား
မြန်မာစာပေ ပြုစုရေးနှင့် ဘာသာပြန် ကော်မရှင်
မြန်မာစာအဖွဲ့ သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသားဘာသာစကား ဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ မြန်မာစာအဖွဲ့သည် အဘိဓာန်ကျမ်းများ၊ သဒ္ဒါကျမ်းများ အပါအဝင် မြန်မာ စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံကျမ်း၊ မြန်မာစကားပုံ၊ မြန်မာစာ မြန်မာစကား၊ မြန်မာ့ဆိုရိုးစကား၊ မြန်မာပင့်ရစ်ခွဲထားရကန်နှင့် မြန်မာစာ မြန်မာမှု၊ ပါဠိ အဘိဓာန် စသည်တို့ကို ပြုစုထုတ်ဝေထားသည်။
၄ လက်ရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းများ
မြန်မာစာပေ ပြုစုရေးနှင့် ဘာသာပြန်ကော်မရှင်ကို ၁၉၆၃ ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် တော်လှန်ရေးကောင်စီ အစိုးရမှ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ထို့နောက် မြန်မာဘာသာနှင့် ပတ်သက်သော အဘိဓာန်များ၊ စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံကျမ်းများ၊ ကိုးကားစာအုပ်များ စသည်တို့ကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
၁၉၇၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့တွင် မြန်မာစာကော်မရှင် အဖြစ်လည်းကောင်း၊၁၉၇၅ တွင် မြန်မာစာအဖွဲ့အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ၁၉၈၁ တွင် မြန်မာစာအဖွဲ့ဦးစီးဌာန၊ နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် မြန်မာစာနှင့်ဘာသာစကားပညာရေးဦးစီးဌာန ဟူ၍ အသီးသီး ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ဝေါဟာရ ပြည့်စုံသော၊ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံအရာတွင် ထုံးစီမံမျှ ဖြစ်သော၊ အနက်အဓိပ္ပာယ် မှန်ကန်တိကျသော၊ အကိုးအထောက် ခိုင်မာစုံလင်သော၊ ခေတ်မီစနစ်ကျသော မြန်မာ အဘိဓာန်ကျမ်းမျာပြုစုခြင်း၊
မြန်မာစာအရေးအသား မှန်ကန်မှု၊ ရှင်းလင်းမှု၊ ကျစ်လျစ်မှု၊ ထိမိမှုကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေနိုင်မည့် မြန်မာသဒ္ဒါကျမ်းများ ပြုစုခြင်း။
မြန်မာစာပေ စာစုစာရင်းအား ပြုစုခြင်းနှင့် မြန်မာ့စာပေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် သုံးသပ်ခြင်းနှင့် အကြံပြုခြင်း၊
တိုင်းရင်းသားစာပေများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
မြန်မာစာအဖွဲ့သည် အထက်ပါရည်မှန်းချက်များကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အလို့ငှာ အောက်ပါ နည်းလမ်းများကို ချမှတ်၍ အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည်-
လိုအပ်သောအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း၍ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
နိုင်ငံတော်၏ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အခြား အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊
ပုဂ္ဂလိကပိုင် စာအုပ်များ၊ စာမူများကို လိုအပ်ပါက မူပိုင်အဖြစ်ဝယ်ယူ၍ အသုံးပြုခြင်း၊
မည်သည့်စာပေပညာရှင်ကိုမဆို သင့်လျော်သည့် ဉာဏ်ပူ‌ဇော်ခ ချီးမြှင့်၍ စာအုပ်စာတမ်း ပြုစုစေခြင်း၊
အဖွဲ့၏ရည်ရွယ်ချက်များ ထမြောက်အောင်မြင်စေရေးအတွက် ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနက ပေးအပ်သည့် အခြားသောပညာရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။
ဝေါဟာရ ပြည့်စုံ၍ မှန်ကန်တိကျသော ခေတ်မီစနစ်ကျသော မြန်မာအဘိဓာန်များ ပြုစုထုတ်ဝေရန်။
မြန်မာစာအရေးအသား မှန်ကန်မှု၊ ရှင်းလင်းမှု၊ ကျစ်လျစ်မှု၊ ထိမိမှုတို့ကို အကျိုးပြုမည့် မြန်မာသဒ္ဒါကျမ်းများ ပြုစုထုတ်ဝေခြင်း။
မြန်မာစာ၏ အခြားသော ရှုထောင့်များအရ လိုအပ်သည့် စကားပရိယာယ်ကျမ်း၊ စာကိုးကျမ်း၊ဝေါဟာရပဒေသာ၊ တစ်ဦးဆိုင် အမည်များအဘိဓာန် စသည်ကျမ်းများ။
တိမ်မြုပ်ရှေးစာပေ ဘာသာစကား ဖော်ထုတ်လေ့လာခြင်း
၁၉၇၅ ခုနှစ်မှယနေ့အထိ မြန်မာစာအဖွဲ့တွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော မြန်မာစာအဖွဲ့ဝင်များမှာ-
ဦးစန်းငွေ (ဒဂုန်ဦးစန်းငွေ) (၁၉၈၃ မှ ၁၉၉၁)
ဦးဆန်းထွန်း (မန်းတက္ကသိုလ်ဆန်းထွန်း)၊ လ/ထကထိက(အငြိမ်းစား)၊ မြန်မာစာဌာန၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ် (၁၉၈၃ မှ ၁၉၈၉)
ဦးဘညွန့် ပါမောက္ခ(အငြိမ်းစား)၊ သမိုင်းဌာန၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်(၁၉၈၃ မှ ၁၉၉၂)
ဦးလှဘေ (ဒဂုန်ဦးလှဘေ) (၁၉၈၃ မှ ၁၉ )
ဦးလှရွှေ ၊ ပါမောက္ခချုပ်(အငြိမ်းစား)၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်(၁၉၈၃ မှ ၁၉၉၃)
ဦးသော်ဇင် (သော်ဇင်) (၁၉၈၃ မှ ၁၉၉၀)
ဒေါ်သန်းဆွေ (မြမဉ္ဇူ)၊ ပါမောက္ခ(အငြိမ်းစား)၊ မြန်မာစာဌာန၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်(၁၉၈၅ မှ ၂၀၀၂)
ဒေါ်အုန်းခင် ကထိက(အငြိမ်းစား)၊ အင်္ဂလိပ်စာဌာန၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်(၁၉၈၅ မှ ယနေ့အထိ)
ဦးထင်ကြီး(တက္ကသိုလ်ထင်ကြီး)၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(အငြိမ်းစား)၊ စာပေဗိမာန်(၁၉၈၅ မှ ၂၀၀၄)
ဦးအောင်သော် ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(အငြိမ်းစား)၊ ရှေးဟောင်းသုတေသနဦးစီးဌာန(၁၉၈၅ မှ ၁၉၉၁)
ဦးမောင်မောင်တင်(၁၉၈၅ မှ ၁၉၉၁)
ဒေါ်ခင်စု(၁၉၈၅ မှ ၁၉၉၁)
ဦးမြအောင်(၁၉၈၅ မှ ၁၉၉၁)
ဒေါက်တာအုန်းခိုင်(၁၉၈၅ မှ ၁၉၉၁)
ဦးသန်းထွတ်(၁၉၈၅ မှ ၁၉၉၁)
ဦးချမ်းသာ(လက်ဝဲမင်းညို လက်ယာစံထား) (၁၉၈၆ မှ ၁၉၉၀)
ဦးစိုးမောင် (သာဂရငစိုး) ၊ အယ်ဒီတာချုပ်၊ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ(၁၉၈၆ မှ ၁၉၉၈)
ဦးထင်ဖတ် (မောင်ထင်)၊ ညွှန်ကြားရေးဝန်၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန(၁၉၈၆ မှ ၂၀၀၆)
ဒေါ်ရင်ရင်(စောမုံညင်း)၊ သုတေသနအရာရှိ၊ ပါတီဌာနချုပ်(၁၉၈၆ မှ ၂၀၁၁)
ဦးဝင်းဖေ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(အငြိမ်းစား)၊ ယဉ်ကျေးမှုဗိမာန်ဦးစီးဌာန(၁၉၈၈ မှ ယနေ့အထိ)
ဒေါက်တာသန်းထွန်း၊ ပါမောက္ခ(အငြိမ်းစား)၊ သမိုင်းဌာန၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်(၁၉၉၁ မှ ၁၉၉၁)
ဒေါ်ခင်ခင်မ၊ အငြိမ်းစားပါမောက္ခ(အငြိမ်းစား)၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာန၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်(၁၉၈၅ မှ ၁၉၉၁)
ဒေါ်ကြန်(မကြန်)၊ အကြီးတန်းသုတေသနအရာရှိ(အငြိမ်းစား)၊ သမိုင်းဌာန(၁၉၉၁ မှ ယနေ့အထိ)
ဒေါ်မြင့်သန်း၊ ကထိက(အငြိမ်းစား)၊ မြန်မာစာဌာန၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်(၁၉၉၁ မှ ၂၀၁၅ အထိ)
ဦးမြင့်ကြည်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(အငြိမ်းစား)၊ မြန်မာစာအဖွဲ့ဦးစီးဌာန(၁၉၉၅ မှ ယနေ့အထိ)
ဦးကိုလေး(ဇေယျာမောင်) အဓိပတိ၊ မန်းတက္ကသိုလ်(၁၉၉၆-ခုနှစ်မှ ၂၀၀၃-ခုနှစ်ထိ)
ဦးထွန်းတင့်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(အငြိမ်းစား)၊ မြန်မာစာအဖွဲ့ဦးစီးဌာန(၁၉၉၆-ခုနှစ်မှ ယနေ့အထိ)
ဦးတင်လွင်၊ ပါမောက္ခ(အငြိမ်းစား)၊ အရှေ့တိုင်းပညာဌာန၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်(၁၉၉၆-ခုနှစ်မှ ၂၀၁၄)
ဦးကျော်အောင်၊ စာတည်း(အငြိမ်းစား)၊ ဘာသာပြန်နှင့် စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးဌာန (၁၉၉၆-ခုနှစ် မှ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်ထိ)
ဦးမြတ်ကျော်၊ စာတည်း(အငြိမ်းစား)၊ မြန်မာစာအဖွဲ့ဦးစီးဌာန(၁၉၉၆-ခုနှစ် မှ ၂၀၀၈-ခုနှစ်ထိ)
ဦးခင်အေး၊ ပါမောက္ခ(အငြိမ်းစား)၊ မြန်မာစာဌာန၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်(၂၀၀၈-ခုနှစ်မှ ယနေ့အထိ)
ဦးစံလွင်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(အငြိမ်းစား)၊ မြန်မာစာအဖွဲ့ဦးစီးဌာန(၂၀၀၈-ခုနှစ်မှ ယနေ့အထိ)
ဦးတင်ခ၊ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး(အငြိမ်းစား)၊ သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်း(၂၀၁၂-ခုနှစ်မှ ယနေ့အထိ)
ဒေါ်ခင်သိန်း၊ ပါမောက္ခ(အငြိမ်းစား)အရှေ့တိုင်းပညာဌာန၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်(၂၀၁၂-ခုနှစ်မှ ယနေ့အထိ)
ဒေါ်ခင်ဆွေမြင့်၊ ပါမောက္ခ(အငြိမ်းစား) မြန်မာစာဌာန၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်(၂၀၁၂-ခုနှစ်မှ ယနေ့အထိ)
ဦးမင်းနိုင်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(အငြိမ်းစား)၊ မြန်မာစာအဖွဲ့ဦးစီးဌာန (၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ ယနေ့အထိ)
၁၉၈၁ ခုနှစ် မြန်မာစာအဖွဲ့ ဦးစီးဌာနကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေအရ လက်ရှိ ဖွဲ့စည်းထားရှိသော မြန်မာစာအဖွဲ့ဝင်များမှာ
ဦးမင်းနိုင် တို့ ဖြစ်ကြသည်။
↑ Allott၊ Anna J. (1981)။ Seong Chee Tham (ed.)။ Prose Writing and Publishing in Burma: Government Policy and Popular Practice။ Essays on Literature and Society in Southeast Asia: Political and Sociological Perspectives။ NUS Press။ ISBN 9789971690366။
↑ Watkins၊ Justin (2007)။ Studies in Burmese Linguistics။ Australian National University။ ISBN 9780858835597။
↑ မြန်မာစာနှင့်ဘာသာစကားပညာရေးဦးစီးဌာန။ မြန်မာစာအဖွဲ့။ 27 March 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
မြန်မာစာနှင့် ဘာသာစကားပညာရေးဦးစီးဌာန တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြန်မာစာအဖွဲ့&oldid=669553" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၈ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၂၃:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။